Ihe ịrịba ama: ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ na ihe ọ na-enye anyị n'adịghị ka WhatsApp na Telegram | Gam akporosis
Ignacio Lopez | 12/04/2021 12:00 | Emelitere ka 12/04/2021 13:16 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Ihe mgbaàmà bụ ikpo okwu izi ozi echedoro Ọ na-ezipụ ozi na njedebe-na-njedebe, nke mere na ọ nweghị onye nwere ike ịnweta ozi n'okporo ụzọ nwere ike ịnweta ọdịnaya ha. Ọ bụ eziokwu na WhatsApp na-enye anyị otu nchekwa ahụ, site na ịbụ akụkụ nke Facebook, a na-ajụ ajụjụ nzuzo.
Telegram, ka ọ dị ugbu a, na-ezipụ ozi na-eziga n'etiti ndị ọrụ, ma naanị na njedebe na chats nzuzo. N'ihi ọrụ Telegram, anyị nwere ike ijide mkparịta ụka site na ngwaọrụ ọ bụla ọzọ, na-edebe ozi ndị echekwara na sava ahụ.
Otú ọ dị, nke ahụ apụtaghị na Telegram anaghị echekwa echekwa. La clave para descifrar los mensajes almacenados en los servidores de Telegram, no se encuentran en la misma ubicación, por lo que ningún empleado que trabaje físicamente en los servidores, puede tener acceso a la clave para acceder a nuestras conversaciones.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji nkata ebe ezoro ezo ozi na njedebe, ọ dịghị mkpa ịbanye na mgbaàmà ma ọ bụ WhatsApp,, ebe ọ bụ na anyị nwere ike iji nkata nzuzo nke Telegram na-enye anyị. Typedị nkata a na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka ngwa abụọ ahụ, na-enweghị ịchekwa ozi ahụ na igwe ojii, yabụ na enweghị onye nwere ike ịnweta ọdịnaya ya.
1 Kedu ihe mgbaàmà
2 Olee otú mgbaàmà si arụ ọrụ
3 Ọrụ mgbaàmà
3.1 Ozi otu
3.2 Oku vidiyo nke ruru mmadụ 8
3.3 Hichapụ zitere ozi na-enweghị ahapụ a Chọpụta
3.4 Oku oku
3.5 Dị Desktọpụ
4 Kedu ọrụ ndị ọrụ mgbaàmà na-enye anyị?
4.1 Na-agafe mmachi nke mba
4.2 Ozi ndị na-akpaghị aka na-ehichapụ
4.3 Zoo ọnọdụ gị na oku
4.4 Onye ozi nzuzo
4.5 Na-ejedebe oge ole enwere ike ile vidiyo ma ọ bụ onyonyo
4.6 Ma ọkwa dị iche maka mkparịta ụka ọ bụla
4.7 Zoo ozi na ihuenyo mkpọchi
4.8 Ọ nweghị onye ọzọ nwere ike ịdebanye aha ekwentị gị
4.9 Gbochie onye na-ezipụ site na iweta ihuenyo
4.10 Mee ka ihu ihe oyiyi anyị kesaa
5 Otu esi ebudata Signal
Kedu ihe mgbaàmà
A na-etinye mgbama, dị ka Telegram, n'egbugbere ọnụ onye ọ bụla mgbe WhatsApp kwụsịtụrụ ịrụ ọrụ nwa oge na / ma ọ bụ mgbe mmadụ ihe ojoo ohuru ohuru gbara gburugburu ikpo okwu, dị ka mbido 2021, mgbe ụlọ ọrụ ahụ kwuru mgbanwe na usoro ọrụ nke o kwuru na ya ga-ekerịta ozi ahụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ so na otu otu: Instagram na Facebook.
Esos cambios úHa na-emetụta mba ndị na-abụghị akụkụ nke EuropeN'ihi eziokwu ahụ bụ na European Union ekweghị ka ụlọ ọrụ Mark Zuckerberg jiri data onye ọrụ egwu egwu.
N’afọ 2014, akpọrọ ngwa izi ozi a TextSecure, ngwa nke nke Edward Snowden toro arụmọrụ ahụ ma na nche na nzuzo. Na 2015, ọ gbanwere aha ya na Signal.
Olee otú mgbaàmà si arụ ọrụ
A na-ejikwa onyinye site na onyinye iji nọgide na-enwe nnwere onwe ha. Dị ka anyị nwere ike ịgụ na weebụsaịtị ya, ọ gaghị anabata ego isi ego iji mee ka ọrụ a ga-adịgide.
La European Union na-atụ aro iji mgbaàmà Dị ka ngwa izi ozi akwadoro kemgbe afọ 2020 maka eziokwu ahụ bụ na ọ mepere emepe ma onye ọ bụla nwere ike ịhụ etu o si arụ ọrụ yana na ọ na-ezipụ ozi, oku na oku vidiyo site na njedebe ruo na njedebe.
Agbanyeghị na ozi ezoro ezo nke WhatsApp na Telegram na-enye anyị otu ọrụ, ọtụtụ bụ ndị nta akụkọ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị malitere iji ngwa a na mgbakwunye na ọtụtụ ndị ọrụ na-echegbu onwe ha banyere nzuzo ha.
Ihe ngosi na-arụ ọrụ, dịka WhatsApp jikọtara na nọmba ekwentị, nọmba ekwentị nke ha anaghị esonye ụdị ozi ọ bụla metụtara ojiji anyị ji nyiwe. Na mgbakwunye, ha anaghị ere data anyị iji zube mgbasa ozi ma ọ bụ nweta uru n'ụzọ ndị ọzọ iji chekwaa sava ahụ.
Dị ka ezigbo ngwa a na-akwụ ọnụ, Ihe Ngosi na-enyekwa anyị ohere ịmepụta otu iji kesaa ozi, vidiyo, foto, emoticons, gifs ma ọ bụ ụdị ọdịnaya ọ bụla, gụnyere faịlụ nke ụdị ọ bụla.
Oku vidiyo nke ruru mmadụ 8
Ihe mgbaàmà na-enye anyị ohere ime video oku na-eji ruo 8 ndị mmadụ. Kpọọ oku vidiyo niile bụ ezoro ezo na njedebe, yabụ enweghị onye ga-enwe ike ịnweta ọdịnaya gị.
Hichapụ zitere ozi na-enweghị ahapụ a Chọpụta
WhatsApp nwere Mania nke na-agwa onye nnata ozi na onye nzipu ehichapula ozi ezigara, ọ bụ ezie na agụbeghị nke a ka ọ na-eme n'ọtụtụ oge mgbe anyị hichapụ ozi.
N'ihi ọrụ nke mgbaàmà, izo ya ezo na njedebe dị ka WhatsApp, anyị agaghị enwe ike ihichapụ ozi ọ bụla mgbe ezigara ha, ebe ọ bụ na mgbe obere oge gachara, naanị nhọrọ ịhichapụ ya na nkata anyị ga-egosi. Ọ bụrụ otu a, ugbu a anyị enweghị ike ịme ihe ọbụla iji hichapụ ozi ezitere.
Mgbe ozi ndị ahụ ezughi ibu mkparịta ụka, Nbanye na-enye anyị ohere ịkpọ oku n’igwe, na-ezokwa IP anyị ka ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịbanye ya ma nweta IP ahụ, ha enweghị ike ịchọta anyị.
- Ozi ngwa ngwa nke na-anaghị enye ụdị weebụ ma ọ bụ site na ngwa, enweghi ọdịnihu. Ihe mgbaàmà, abụghị otu n'ime ha yana dị ka ezigbo izi ozi ngwa, ọ na-enye anyị ụdị ntanetị iji nwee ike ịgbaso mkparịta ụka nke ọma na keyboard.
Kedu ọrụ ndị ọrụ mgbaàmà na-enye anyị?
Ihe mgbaàmà, dị ka ngwa izipu ozi ọ bụla, na-enye anyị ihe dịka ọrụ anyị nwere ike ịchọta na WhatsApp ma ọ bụ Telegram. Agbanyeghị, n'ihi ọdịdị ya lekwasịrị anya na nzuzo, ọ na-enye anyị usoro nhọrọ ndị a na-ahụghị na nyiwe abụọ, dị ka:
Na-agafe mmachi nke mba
Ọ bụrụ na anyị nọ na mba ebe ngwa achoputala, anyị nwere ike ime ka nhọrọ ahụ Zere mmachi, ọrụ gafere nnabata obodo iji nye gị ohere ịga n'ihu na-eji ngwa ahụ na-enweghị mmachi.
Nhọrọ a dị na ngalaba Nzuzo - Nke di elu.
Ozi ndị na-akpaghị aka na-ehichapụ
Ọ bụ ezie na WhatsApp na Telegram na-enye anyị ohere na-ehichapụ ozi anyị zitere na-akpaghị akaSite na mgbaàmà, anyị nwere ike iji aka anyị dozie oge ga-agafe kemgbe ozi anyị zigara na-agụ iji gaa n'ihu ihichapụ ha.
Obere oge anyị nwere ike igosipụta site na mgbe onye nnata gụrụ ozi ruo mgbe ehichapụ ha bụ 5 sekọnd ịbụ nke kachasị nke otu izu.
Zoo ọnọdụ gị na oku
Nhọrọ ọzọ na-adọrọ mmasị nke mgbaàmà na-enye anyị dị na enwere ike rdezie oku olu anyị na-eme, ọrụ zuru oke iji zere ikpughe adreesị IP anyị.
Onye ozi nzuzo
Nhọrọ zitere nzuzo na-egbochi ihe nkesa mgbaàmà ịma onye na-eziga ndị ozi nke mere na ọ bụ naanị onye nabatara ha ga-ama onye zitere ha site na nọmba ekwentị ha.
Ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ Kwe ka ọrụ nke onye ọ bụla, anyị ga-enwe ike rjiri ozi nzuzo ziga ozi nke ndị na-anọghị na kọntaktị anyị na ndị na-enwetụbeghị profaịlụ anyị, ya mere ọ bụ otu n'ime ngwa ndị ọrụ nta akụkọ na-ejikarị.
Na-ejedebe oge ole enwere ike ile vidiyo ma ọ bụ onyonyo
Mgbe anyị na-ekerịta onyonyo ma ọ bụ vidiyo, anyị nwere ike setịpụrụ oke ele njedebe enweghị njedebe dị ka ngwa izipu ozi niile ma ọ bụ belata ngosipụta na otu oge.
Ma ọkwa dị iche maka mkparịta ụka ọ bụla
Ọrụ nke ọ bụla ngwa ọzọ nwere nwere ike inwesetịpụ ọkwa dị iche maka mkparịta ụka ọ bụla anyị nwere na ngwa ahụ, nke na-enye anyị ohere ịmata nke ọma, onye ozi anyị natara kwekọrọ.
Zoo ozi na ihuenyo mkpọchi
Ọrụ ọzọ bara uru na Signal dị na ohere nke zoo ma zipu na ozi site na ngosi na mkpọchi ihuenyo nke ọnụ anyị. Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị meghee ọnụ, ngosi ahụ ga-aga n'ihu na-egosi ederede "Ozi ọhụrụ" na-enweghị igosi onye zitere ma ọ bụ ederede.
Nanị ụzọ ị ga-esi nweta ọdịnaya nke ọkwa ahụ bụ mepee ngwa, ngwa nke anyị nwere ike ichebe site na koodu nnweta, site na mkpisiaka, site na nnweta ihu ...
Ọ nweghị onye ọzọ nwere ike ịdebanye aha ekwentị gị
Ọ bụrụ na anyị tinye PIN na akaụntụ mgbaàmà anyị, ọ nweghị onye ma anyị agaghị enwe ike deba aha ekwentị anyị, Ezigbo ọrụ ka onye ọ bụla ma anyị wee jiri akaụntụ mgbaàmà anyị.
N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na mmadụ emeso anyị zuru akaụntụ ahụYou nweghị ike ịme nke a belụsọ na ị matara koodu PIN nke anyị hibere mbụ iji chedo akaụntụ anyị.
Gbochie onye na-ezipụ site na iweta ihuenyo
Ihe ngosi na-enye gị ohere ịhazi ngwa nke ndị na-eziga ozi anyị enweghị ike iwe nseta ihuenyo nke mkparịta ụka anyị nwere.
Mee ka ihu ihe oyiyi anyị kesaa
Eziokwu n'ebumnuche ya lekwasịrị anya na nzuzo, mgbe ị na-ekerịta ihe oyiyi, ngwa ahụ na-enye anyị ohere na-emechi ihu ndị mmadụ ozugbo a gosipụtara na-enweghị iji nchịkọta akụkọ foto nke ama anyị.
Otu esi ebudata Signal
Dị ka ngwa izipu ozi niile dị ugbu a n'ahịa, akara aka dị maka nke gị budata n'efu Ọ naghị agụnye ụdị mgbasa ozi ma ọ bụ ndenye aha ọ bụla, ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụhaala na ị ga-anọgide na-ebi na onyinye.
Iji nwee obi ụtọ na ngwa a, nke gafere nde 50 na nbudata na Storelọ Ahịa Play ọnwa ole na ole gara aga, ama ama gam akporo anyị Ọ ga-jisiri site gam akporo 4.4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
O nwere ike ịbụ na mgbama dị dịkwuo kacha nta gam akporo version chọrọ n'ọdịnihu, ma, n'oge a na-ebipụta isiokwu a, Eprel 2021, ha bụ ndị m gosipụtara na paragraf bu ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ihe ngosi: gini bu ya, kedu ka o si aru oru na ihe o n’enye anyi n’adighi ka WhatsApp na Telegram